हाइकिङ्ग इन् द भुज माउन्टेन्स् – A mélange, as LIFE is
May 17, 2020 September 19, 2020 Aditya Acharya
हाइकिङ्ग इन् द भुज माउन्टेन्स्
करिब दुई महिनाको लकडाउन पछि, हिजो हाइकिङ जाने अवसर मिल्यो। उत्तरपूर्वी फ्रान्सको भुज् हिमालतिर। यहाँको लागि त्यो Vosges Mountain हो, तर हामीले नेपालसँग तुलना गर्दा यी पहाडहरु हाम्रा फुच्चे पहाडहरु जत्रै जत्रै छन्। अनि रमाइलो कुरो चाहिँ के भने – हाइकिङ जानको लागि सबै तयारी गर्छन्, तयार हुन भन्छन् र हिँड्न जाने ठाउँ चाहिँ म बच्चा बेलामा बाख्रा चराउन जाने गरेको बाटाहरु भन्दा सजिलो ठाउँमा हुन्छ। मेरो लागि रमाइलो कुरो भनेको; ठाउँअनुसारको फरक त बुझिहाल्छु। म जन्मेहुर्केको ठाउँ हेर्न जाउँ भनेर यी साथिहरुलाई बोलाएँ भने – हाइकिङको लागि तयार हौ भन्नुपर्ला! 🙂
यहीँ फ्रान्सको एउटा साथि ‘जिन’ले ‘हाइकिङजान मन भए जाऊँ’ भन्यो। घर भित्र बस्दा बस्दा दिक्क भएको, जङ्गल डुल्न जान पाए किन नजानु। त्योमाथि आफूलाई बच्चै देखि मनपर्ने कुरो। अनि भर्खरै लागेको वसन्त रितु (Spring) को हरियाली। पाँच जना जाने सल्लाह भएको थियो, एउटा अलि सन्चो नभएकोले नजाने भयो। त्यसैले जम्मा चार जना। आ-आफ्नो खानेकुरा बोकेर बिहान ९ बजेतिर हिँडियो। हिँडियो मतलब, हाइकिङ जानको लागि कारमा चढेर भुज हिमालतिर। हिँड्ने त ‘हाइकिङ ट्रेल’ आएपछि बल्ल सुरु हुन्छ। करिब १०० किलोमिटर, करिब १ घन्टाको यात्रापछि। हिँडाइको सुरुवात गर्ने ठाउँमा अर्को एकजना साथि पनि भेटियो। त्यसैले हाइकिङ्ग टोली ५ जनाको भयो।
Europe, Americas, Asia, Africa (Missing Australia and Antarctica😂 )
पुगेर हिँडाइ सुरु गर्दा करिब पौने ११ बज्यो। पढ्ने विषयवस्तु नै जङ्गल; जङ्गलमा हिँड्दा केही न केही त पढिन्छ नै। अरु केही नपढे पनि – यो कुन प्रजातिको रुख/विरुवा हो भनेर चिन्ने काम। चरिअमिलो (Oxalis (articulata, MAYBE!)) र युरोपियन बिच (Fagus sylvatica)को (कलिलो) पात खान मिल्ने भएकोले तिनीहरुको पात अलिअलि खाइयो। Fagus sylvatica को पात पहिलोपटक पोहोर यसै महिनामा रोमानियामा खाएको थिएँ। त्यो बेला खुबै रमाइलो भएको थियो।
जङ्गलमा पहिलो विश्वयुद्धका धेरै अवशेषहरु देखिँदा रहेछन्। Fortress (हाम्रोतिर गढि भन्छन् सायद?), जर्मनहरुलाई आक्रमण गर्न वा रोक्न बनाइएका सैनिक लुक्ने खाडलहरु, अनि प्रयोग गरिएका गुफाहरु। (यो ठाउँ जर्मनीको सिमानामा पर्छ।)
केही घन्टा हिँडेर जङ्गलबीचको एउटा तालमा पुगेर खानेकुरा खायौँ। केहीबेर आरम गर्‍यौँ। अनि फर्कियौँ हाइकिङ सुरु गरेको ठाउँमा। करिब ६ घन्टा, अनि लगभग १६ किलोमिटरको हिँडाइ। त्यसपछिको, घरसम्मको करिब १०० किलोमिटरको यात्रा त छँदैछ। 🙂
Previous Closed: The Footpath University
Next Anything feels nicer?